13 Jaamacadaha ugu Qaalisan USA Ardayda Caalamiga ah
27 Jaamacadaha ugu Qaalisan USA ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan jaamacadaha ugu raqiisan Maraykanka ee ardayda caalamiga ah. Marka, haddii aad tahay arday caalami ah oo raadinaya iskuulo la awoodi karo oo aad ku sii wadi karto koorsadaada riyadeed ee Mareykanka, waxaan kugu soo koobnay halkan.
Hay'adaha Mareykanka ayaa caan ku ah bixinta shahaadooyinka ugu fiican adduunka. Sida laga soo xigtay Times Higher Education, in ka badan shan jaamacadaha dalka Mareykanka waxay ka mid yihiin tobanka jaamacadood ee adduunka ugu fiican.
Si kastaba ha noqotee, waxbarashada Mareykanka kuma imaaneyso mid rakhiis ah gaar ahaan ardayda caalamiga ah. Tani waa sababta ay inta badan caalamku ugu dadaalaan inay ku guuleystaan ​​deeqaha waxbarasho si ay uga caawiyaan maalgelinta waxbarashadooda. Waxa ugu fiican hadda waa haddii aadan haysan deeq waxbarasho oo aad ku barato, waxaa jira iskuulo qiimo jaban oo ku yaal Mareykanka halkaas oo aad iska qori karto waxbarashaddaada.
Marka, maqaalkani wuxuu qori doonaa oo sharxi doonaa qaar ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
Immisa ayey ku kacaysaa in wax lagu barto America oo ah arday caalami ah?
Arday caalami ah ma ku baran karaa bilaash gudaha Mareykanka?
Waa kuwee jaamacadda ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah?
Jaamacadaha ugu raqiisan Mareykanka ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee masters-ka
Jaamacadaha dadweynaha ee ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah
Jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda Hindida ah
Jaamacadaha ugu Qaalisan USA Ardayda Caalamiga ah
Kulliyadda South Texas College
Jaamacadda Arkansas State
Jaamacadda Minot State
Jaamacadda Alcorn State
Kuliyadaha San Mateo ee Silicon Valley
Kuliyada Bulshada ee Hillsborough
Jaamacadda Sonoma State University
Jaamacadda South East Missouri University
Jaamacadda Magaalada New York
Mareykanka dhexdiisa, kharashka waxbarashada ee jaamacadaha dowliga ah ayaa isbarbar dhig ka hooseeya hay'adaha gaarka loo leeyahay. Kharashka waxbarashadu wuxuu kuxiranyahay xulashadaada machadka, koorsada, iyo barnaamijka waxbarashada.
Qiimaha shahaadada koowaad ee ardayda caalamiga ah jaamacadaha dadweynaha gudaha USA waxay u dhaxaysaa $ 25,000- $ 35,000 sanadkii halka hay'adaha gaarka loo leeyahay u dhexeeya $ 30,000 in $ 45,000 sanadkiiba. Intaa waxaa dheer, kharashka shahaadada jaamacadeed ee a kulliyadda beesha gudaha Mareykanka wuxuu u dhexeeyaa $ 6,000 in $ 20,000 sannadkiiba.
Barnaamijyada qalin-jabinta, kharashku wuxuu u dhexeeyaa $ 20,000 in $ 45,000 sanadkiiba. Qaar ka mid ah barnaamijyada qalin-jabinta xirfadleydu waxay ka qiimo badan yihiin barnaamijyada qalin-jabinta ee qaybaha kale ee daraasadda.
Qiimaha shahaadada dhakhtar ayaa udhaxeysa $ 28,000 in $ 55,000 sannadkiiba.
Haa. Xaqiiqdii waad ku baran kartaa bilaash waddanka Mareykanka adoo ku guuleysanaya deeq waxbarasho oo ah shahaadadaada koowaad, qalin-jabinta, ama daraasadda sare.
Waad dooran kartaa iskuulo la awoodi karo oo lacag yar ka qaata waxbarashada laakiin maskaxda ku hay inaad u baahan tahay inaad buugaag, hoy, iyo ujrooyin kaleba bixiso. Ku guuleysiga deeqda waxbarasho ee Mareykanka, waxaad heli doontaa lacag aad ku daboosho kharashka waxbarashadaada oo aad si bilaash ah wax ugu barato.
Jaamacada ugu raqiisan Mareykanka waa Jaamacadda Dadka (Dadweynaha). Hay'adani waxay bixisaa waxbarasho bilaash ah oo loogu talagalay ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, ardayda waxaa laga rabaa inay bixiyaan khidmadaha maamulka qaarkood si loo daboolo qiimeynta koorsada, oo u dhexeysa $ 2,460 shahaadada jaamacadeed illaa $ 4,860 oo loogu talagalay barnaamijka shahaadada koowaad ee bachelor-ka.
Jaamacadaha ugu raqiisan Mareykanka ee ardayda caalamiga ah ee shahaadada mastarka waxaa ka mid ah:
Jaamacadda Metropolitan State (Minnesota)
Jaamacadaha dowliga ah ee Mareykanka waxaa iska leh oo maalgeliya dowladda Mareykanka. Jaamacadahaani waxay bixiyaan waxbarasho tayo sare leh oo loogu talagalay ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee dhinacyada kala duwan ee waxbarashada heerar kasta.
Jaamacadaha dowliga ah ee ugu raqiisan Mareykanka ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah waxaa ka mid ah:
Jaamacadaha ugu jaban gudaha Mareykanka ardayda Hindida ah waa sida soo socota:
Hoos waxaa ku taxan jaamacadaha ugu raqiisan gudaha Mareykanka ardayda caalamiga ah. Maskaxda ku hay in jaamacadahaani ay bixiyaan waxbarasho heer sare ah inkasta oo ay yihiin kuwo la awoodi karo.
Sidaa darteed, jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah waa:
Jaamacadda Dadka (Dadweynaha) waa mid gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn, waxbarashada masaafada, ama jaamacad khadka tooska ah laga hirgaliyay sanadkii 2009. Hay'addu waa jaamacaddii ugu horreysay ee bixisa waxbarashada internetka lacag la'aan adduunka oo dhan.
UoPeople ayaa bixiya iskuduwaha, jaamacadaha, iyo barnaamijyada shahaadada mastarka ee dhinacyada tacliinta kala duwan. Qeybahan tacliinta waxaa ka mid ah maamulka ganacsiga, sayniska kombiyuutarka, waxbarashada, iyo cilmiga caafimaadka. Ardaydu waxay wax ka bartaan xubnaha macallimiinta NYU iyo UC Berkeley khadka tooska ah.
UoPeople waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah maadaama machadku uusan kajirin khidmadaha waxbarashada. Si kastaba ha noqotee, ardayda waxaa laga rabaa inay bixiyaan khidmadaha maamulka qaarkood si loo daboolo qiimeynta koorsada, oo u dhexeysa $ 2,460 shahaadada jaamacadeed illaa $ 4,860 oo loogu talagalay barnaamijka shahaadada koowaad ee bachelor-ka.
UoPeople waxaa aqoonsan Guddiga Aqoonsiga Waxbarashada Foga (DEAC)
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: Free
Kulliyadda Koonfurta Texas (STC) waa kuleejka bulshada bulshada ee Texas oo la aasaasay 1993. Jaamacadu waxay bixisaa shahaadada jaamacadeed iyo shahaadada koowaad ee lix xarumood. Xarumaha waxaa ka mid ah Pecan Campus (weyn), Mid-Valley Campus, Campr County Campus, Technology Campus, Ramiro R. Casso Nursing & Allied Health Campus, iyo E-STC Virtual Campus.
In kasta oo jaamacaddu ay aad u yaryihiin ardayda caalamiga ah, STC waxay ka muuqataa liiska jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
STC waxay aqoonsi ka haysataa Guddiga Kulliyadaha ee Ururka Koonfurta ee Kulliyadaha iyo Iskuulada.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 4,200
Waxaa la aasaasay 1909, Jaamacadda Arkansas State (A-Gobol or ASU) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Jonesboro, Arkansas. Xarunta ugu weyn ee jaamacadda waxay ku taal Jonesboro Arkansas waxayna ku leedahay xarun kale n n Querétaro, Mexico.
ASU waxay bixisaa iskuduwaha, bachelor-ka, masters-ka, iyo barnaamijyada shahaadada takhasuska ee beeraha, injineernimada & teknolojiyada, waxbarashada & sayniska akhlaaqda, farshaxanka iyo isgaarsiinta, deeqda iyo xirfadaha caafimaadka, sayniska & xisaabta, iyo ganacsiga.
A-State wuxuu caan ku yahay waxqabadka cilmi baarista sare (R2: Jaamacadaha Dhakhaatiirta). Xaruntu waa meel fiican oo loogu talagalay ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay sii wataan waxbarashadooda jaamacadeed.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 5,400
Jaamacadda Minot State (MSU or MiSU) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Minot, North Dakota oo la aasaasay 1913.
Jaamacadu waxay bixisaa in ka badan lixdan (60) barnaamijyo shahaadada koowaad ah iyo toban (10) barnaamijyo qalin jabin ah iyada oo loo marayo Kuleejka Fanka iyo Sayniska, Kuliyada Ganacsiga, Kuleejka Waxbarashada iyo Sayniska Caafimaadka, iyo a Dugsiga Sare.
In kasta oo Jaamacadda Minot State ay leedahay qiyaastii 12 boqolkiiba ardayda caalamiga ah, waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu raqiisan gudaha Mareykanka ardayda caalamiga ah.
MiSU waa aqoonsan yahay Guddiga Waxbarashada Sare.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 6,809
Jaamacadda Alcorn State (Gobolka Alcorn, ASU, or Alcorn) waa jaamacad dowladeed oo deeq-bixiye madow ah oo ku taal Lorman, Mississippi oo la aasaasay 1871. Ujeeddada loo aasaasay jaamacaddu waxay ahayd in la siiyo tacliin kuwii ka soo jeeda Afrikaan Mareykan ah oo horay loo addoonsaday.
Alcorn wuxuu leeyahay boqolkiiba qiyaastii 3 boqolkiiba ardayda caalamiga ah. Waxay u dhigantaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha Mareykanka ardayda caalamiga ah.
ASU waxay bixisaa barnaamijyo tacliimeed in kabadan 50 maadooyin kaladuwan oo daraasad ah iyada oo loo marayo toddobo (7) iskuul oo ay kujiraan Iskuulka Beeraha iyo Sayniska La Isticmaalay, Iskuulka Farshaxanka & Sayniska, Iskuulka Ganacsiga, Iskuulka Waxbarashada & Cilmu-nafsiga, iyo Iskuulka Kalkaalinta Caafimaadka.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 6,888
Jaamacadda California State (Gobolka Cal or CSU) waa nidaam jaamacadeed dowladeed oo ku yaal Kaliforniya oo la aasaasay 1857. Cal State waa jaamacadda ugu weyn ee dadweynaha Mareykanka
CSU waxay bixisaa shahaadada koowaad, mastarka, iyo shahaadada dhakhaatiirta in ka badan 240 maado. Qaar ka mid ah maadooyinkaan waxaa ka mid ah injineernimada, macluumaadka tiknoolajiyadda, ganacsiga, beeraha, barashada isgaarsiinta, waxbarashada, iyo maamulka guud.
Jaamacadu waxay soo saartaa tirada ugu badan ee heysata shahaadada bachelor-ka Mareykanka. Intaa waxaa sii dheer, inta badan ardayda ka qalin jabisay CSU waxay sii wataan inay kasbadaan Ph.D. meelaha la xiriira.
In kasta oo Cal State ay leedahay tiro yar oo ardayda caalamiga ah, haddana waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha Mareykanka ardayda caalamiga ah.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 8,151
Kuleejka San Mateo (CSM) waa kuleejka bulshada ee San Mateo, California oo la aasaasay 1922.
Kuleejku wuxuu bixiyaa shahaadooyin heerkoodu sareeyo 79 AA / AS, 75 barnaamijyo shahaadooyin ah, iyo ku dhowaad 100 aagagga wareejinta iyo kuwa waaweyn. CSM sidoo kale waxay siisaa fursado dhowr ah shirkadaha teknolojiyadda sare ee Silicon Valley.
Kuleejka San Mateo wuxuu ku faanaa wareejin damaanad qaad ah iyo iskaashi lala yeesho jaamacado la xushay.
Kulliyadda San Mateo waxay haysataa aqoonsi ka socota Guddiga Aqoonsiga ee Jaalliyadaha iyo Kulliyadaha Yaryar ee Ururka Iskuulada iyo Kulliyadaha ee Galbeedka.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 9,094
Kuliyada Bulshada ee Hillsborough (HCC) waa kuleejka bulshada ee degmada Hillsborough, Florida oo la aasaasay 1968.
HCC waxay leedahay shan xarumood oo ay ka mid yihiin Brandon, Dale Mabry, Plant City, Ybor City, iyo South Shore. Kuleejku wuxuu bixiyaa shahaadooyin iskudhaf ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee waxbarashada. Waxay umuuqataa mid kamid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 9,111
Waxaa la aasaasay 1961, Sonoma State University (SSU, Gobolka Sonoma, ama Sonoma) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Rohnert Park ee Sonoma County, California. Xaruntu waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar nidaamka California State University (CSU).
Jaamacadda Sonoma State waa hay'ad u adeegta Hispanic oo bixisa shahaadada koowaad, qalin-jabinta, iyo shahaadada dhakhaatiirta iyada oo loo marayo lix dugsi oo ka kooban waaxaha 65. Iskuulada waxaa ka mid ah Iskuulka Fanka & Aadanaha, Iskuulka Ganacsiga iyo Dhaqaalaha, Iskuulka Waxbarashada, Iskuulka fidinta & Waxbarashada Caalamiga ah, iyo Iskuulka Cilmiga Bulshada.
SSU waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 9,504
Jaamacadda Bellevue waa jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal Bellevue, Nebraska oo la aasaasay 1966.
Jaamacaddu waxay bixisaa dhowr barnaamij oo isugu jira shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta sida la dedejiyay, koox-koox, fasalka, iyo khadka tooska ah. Intaa waxaa dheer, Jaamacadda Bellevue waxay bixisaa Doctorate of Business Administration iyo Ph.D. ee Maareynta Raasumaalka Aadanaha.
Warbixinta US News & World Report waxay sheegaysaa in shahaadooyinka jaamacadeed ee jaamacadda ay ka mid yihiin tobanka ugu sarreeya dalka.
Jaamacadda Bellevue waxaa aqoonsan Guddiga Sare ee Waxbarashada.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 3,229 - $ 11,973
Jaamacadda Westcliff (WU) waa jaamacad gaar loo leeyahay, oo macaash doon ah oo ku taal Irvine, Kaliforniya oo la aasaasay 1993.
WU waxay bixisaa barnaamijyo dhowr ah oo khadka tooska ah iyo iskudhafan isugu jira oo horseed u ah abaalmarinta shahaadooyinka, shahaadooyinka bachelorka, shahaadooyinka jaamacadda kadib, shahaadooyinka mastarka, iyo shahaadooyinka dhaqtarka.
Jaamacadu waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo ajnabi ah waxayna ka mid tahay jaamacadaha ugu raqiisan gudaha Mareykanka ardayda caalamiga ah.
Jaamacadda Westcliff waxaa aqoonsan Ururka Iskuulada iyo Kulliyadaha Reer Galbeedka (WSCUC).
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 13,560
Jaamacadda Koonfur-bari ee Gobolka Missouri (SEMO) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Cape Girardeau, Missouri oo la aasaasay 1873.
Laga soo bilaabo 2016, tirada ardayda caalamiga ah ee SEMO waxay ahaayeen 11,978. Xaruntu waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
Jaamacadda Koonfur-bari ee Missouri State waxay bixisaa in ka badan 200 barnaamijyo tacliimeed oo horseed u ah abaalmarinta shahaadooyinka bachelorka iyo shahaadada mastarka. Jaamacadu waxay kaloo bixisaa wada shaqeyn Ed.D. barnaamijka iyada oo loo marayo iskaashi ay la leedahay Jaamacadda Missouri.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 14,205
Jaamacadda Magaalada ee New York (CUNY) waa nidaamka jaamacadaha dadweynaha ee magaalada New York oo la aasaasay sanadkii 1961. Waxay ka kooban tahay kow iyo toban kulleejooyin sare, toddobo kuliyadood oo bulshada ah, hal kuliyadood oo ah shahaadada koowaad ee jaamacadeed, iyo toddobo hay'adood oo jaamacadeed.
CUNY waxay leedahay in kabadan 9,000 oo arday caalami ah. Madow, cadaan, iyo Hispanic ardayda dhigata shahaadada koowaad waxay qurxiyaan in kabadan rubuc ka mid ah jirka ardayga halka ardayda Aasiya ee hooseysa ay ka kooban yihiin boqolkiiba 18. Jaamacadu waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan gudaha USA ardayda caalamiga ah.
Waxbaridda ardayda caalamiga ah sanadkiiba: $ 17,400
5 Jaamacadood oo kuyaala USA Bixin Lacag La'aan ah Ardayda Caalamiga ah
25 Jaamacadaha Dadweynaha ee ugu Fiican USA oo leh Deeqo waxbarasho
10 Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay Barnaamijyada Shahaadada iyo Dibloomada
Jaamacadaha Waxbarashada Yar Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
Previous Post:75 Su’aalood Oo Ku Saabsan Ilaah iyo Kitaabka Quduuska ah oo aan laga jawaabi karin
Post Next:13-ka Websaydh ee Wax-barasho ee Ardayda